अर्थतन्त्रका अन्योल कहिलेसम्म ? - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रका अन्योल कहिलेसम्म ?
query_builderFebruary 7, 2017 8:40 AM supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility645
अब सम्भवतः २०१७ मा ‘ट्रम्प सक’ देखा पर्नेछ, त्यसको पहिलो असर एसियामा भारतले झेल्ने निश्चितप्रायः छ ।
हालै मात्र विकिपिडियाले नेपालको मानवीय संकटका तीन वर्ष (२०१५–२०१७) शीर्षकमा एक विश्लेषण पोस्ट गरेको छ । विकिपिडियामा जोसुकैले योेगदान गर्न पाउने भए पनि यसमा सार्वजनिक भइसकेका विवरणलाई आधिकारिक उपयोगका लागि प्रयोग गर्ने चलन छ, किनभने एकपटक प्रकाशित विवरणमा कुनै त्रुटि भएको पाइए अर्को योगदानकर्ताले त्यसलाई सच्याउन पाउँछ ।
मुख्यतया २०७२ वैशाख (२०१५ अप्रिल) को महाभूकम्प र त्यसपछि सिर्जित मानवीय समस्यालाई यसमा उल्लेख गरिएको भए पनि अहिले देशको राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक तीनै पक्षका संकटलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूबाट अलग भएर बस्न सक्दैन । दि इकोनोमिस्टको सन् २०१६ किन विश्व अर्थतन्त्रका लागि खराब थियो भन्ने विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो र नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका निर्णयहरूलाई आधार मान्ने हो भने निकट भविष्यमै विश्व अर्थतन्त्रको सन्तुलन खलबलिने संकेत देखिएको छ ।
युरोपेली युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमनले खलबलिएको विश्व अर्थव्यवस्थामा ट्रान्स एटलान्टिक पार्टनरर्सिप (टीपीपी) बाट अमेरिका अलग्गिने ट्रम्पको निर्णयले अर्को झट्का दिएको छ ।
विश्व व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने १२ वटा मुलुकको ब्लकबाट अमेरिका बाहिरिनुको प्रस्ट अर्थ हो, एसियाको शताब्दीलाई आधार प्रदान गर्नु । योसँगै नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (नाफ्टा) को भविष्यबारे समेत थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्, किनभने ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने तथा आप्रवासीहरूप्रति जुन कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन्, त्यसका प्रतिप्रभावहरू बिस्तारै अमेरिकी अर्थतन्त्र र अमेरिकी डलरले हाँकेको विश्व अर्थतन्त्रमा देखा पर्दै जानेछन् ।
सन् २०१७ विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ प्रकोपको सामना गर्नुपर्ने वर्ष हुन सक्ने एक थरी अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ । सन् २००८ मा अमेरिकी संकटले हाँकेको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका छालहरू मत्थर हुन नपाउँदै ग्रिसका कारणले हाँकिएको युरोपेली आर्थिक मन्दी देखा पर्यो।
त्यो मन्दीबाट युरोजोन बाहिरिन नपाउँदै २०१६ मा ब्रेक्जिटको अर्को धक्का सामना गर्नुपर्यो । अब सम्भवतः २०१७ मा ‘ट्रम्प सक’ देखा पर्नेछ, त्यसको पहिलो असर एसियामा भारतले झेल्ने निश्चितप्रायः छ । किनकि भारतको सेवाक्षेत्रको आय अमेरिकी सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा आश्रित छ ।
ट्रम्प प्रशासनले ‘एच१बी’ भिसामा गरेको कडाइका कारण भारतीय सफ्टवेयर तथा कम्प्युटर इन्जिनियरहरू पहिलो प्रभावित हुनेछन् । यसका साथै आउटसोर्सिङमा आधारित भारतीय आईसीटी कम्पनीहरूमा समेत गम्भीर असर पर्ने अर्को जोखिम छ, किनकि ‘आउटसोर्सिङ’ का विषयमा रिपब्लिकन्सहरू यसअघि नै नकारात्मक थिए ।
‘ट्रम्प सक’को धक्का भारतमा पर्नासाथै ऊमाथि करिब दुईतिहाइ आर्थिक निर्भरता कायम रहेको नेपालमा त्यसका असरहरू देखा पर्ने छन् । ‘दिल्लीमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने’ नेपालका नेताहरूले सम्भावित यो आर्थिक असरबारे अहिले सोच्नसमेत भ्याएका छैनन् वा उनीहरूको सामथ्र्य नै छैन ।
नेपालका नेता, नीतिनिर्माता र प्रशासकहरू कतिसम्म निरीह रहेछन् भन्ने कुरा भारतले विमौद्रीकरण गर्दा आफ्ना मुलुकका वैधानिक आय साट्न नसक्ने पामरताले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ ।
अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको रकमबारे कुनै पहल गर्न नसक्नु बाध्यता होला, तर औपचारिक निर्णयमार्फत नै प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु ५ सय र १ हजार दरका नोट नेपाल भिœयाइएको अवस्थामा त्यसको समेत सटही गराउन नसक्नु सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको हददर्जाको लाचारी हो ।
भनिरहनु पर्दैन, छिमेकी मुलुक भारतमा हुने मुद्रास्फीतिको असर त नेपाली बजारमा पर्छ भने विमौद्रीकरणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आउने १ प्रतिशत अंकको गिरावट र भविष्यमा देखा पर्ने ट्रम्प असरका कारण हुन सक्ने सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरमा कटौतीको असर नेपालमा देखिने जोखिम अत्यधिक छ ।
चीन र भारतको उदयलाई एसियाली शताब्दीको उदयका रूपमा लिने गरिएको छ । यो अवस्थामा जापानी अर्थतन्त्र पनि फेरि पुनर्बहाली हुन सक्ने वा एसियाकै अन्य मध्यम अर्थतन्त्रले विश्वका उत्कृष्ट १० भित्र स्थान लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई सबल तुल्याउँदै एसियाली शताब्दीका लागि तयार पार्न सक्ने भिजिनरी नेताको खाँचो देशमा लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा करिब ५–६ हजारको संख्यामा नेता देखा परे, तर वास्तविक राजनेता कोही पनि देखा पर्न सकेनन् ।
यसको असर हाम्रो आर्थिक विकासमा देखा परिह्यो । देशको आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दा ०४६ सालअघि र आजको आर्थिक विवरणहरू तेस्र्याएर हाम्रो प्रगतिको सूचक देखाउने गरिन्छ । विश्लेषणको पाटोलाई चटक्कै बिर्सेर ती विवरणमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा साँच्चै हो कि भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न हुन्छ ।
उदाहरणका लागि २०४६ सालमा १ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ६० अमेरिकी डलरबाट ७ सय ५५ डलर पुगेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४९ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा पुगेको छ । सहरमा बसोबास गर्ने नेपालीको अनुपात ४२ प्रतिशत पुगेको छ (भलै सहरको परिभाषाबारे सरकार आफैं अन्योलमा किन नहोस !) ।
आव ०४७/४८ को अन्त्यमा ८ हजार ३ सय २८ सडकको अनुपात रहेकोमा अहिले २९ हजार किलोमिटर हाराहारीमा पुगेको छ । त्यतिखेर चानचुन ३३ अर्बको आयात गर्ने नेपालले अहिले वार्षिक करिब ८ खर्ब रुपैयाबराबरको आयात गर्छ ।
आयात बढ्नुको अर्थ उपभोग बढ्नु हो, उपभोग बढ्नका लागि आमनागरिकको क्रयशक्ति क्षमता बढेको हुनुपर्छ, क्रयशक्ति क्षमता बढ्नु भनेको आय आधार पनि बढ्नु हो ।
तर, तथ्यांकहरूले हाम्रो वास्तविक आर्थिक विकास झल्काइरहेका छैनन् । केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा विश्वकै सर्वाधिक गरिब मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ ।
अफ्रिकी मुलुकहरूलाई अलग्याउँदा विश्वका गरिबतम मुलुकमध्ये नेपाल माथिल्लो पंक्तिका पाँचभित्र पर्छ । यसमा गर्व गर्ने कि हीनताबोध ? सीमित व्यक्ति र जनसंख्यालाई हेरेर समग्र मुलुकको आर्थिक विकासको चित्रण गर्न सकिँदैन ।
विश्वव्यापी रूपमै गरिबीको मानक र परिभाषामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । राष्ट्रको समग्र सम्पत्ति मूल्यांकनको विषय पनि अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।
बेलायतले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार बढी देखाउनका लागि वेश्यावृत्ति र अनौपचारिक क्षेत्रको आयलाई समेत गणना पद्धतिमा सामेल गरेको लामो समय बितेको छैन, अर्कातिर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यून मूल्यांकन गरेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसम्बद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लगाएका छन् ।
अहिलेकै सोच, ढाँचा र पद्धतिले आउँदो केही दशकसम्म नेपालले चरम विकासको अवस्था हासिल गर्ला भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ निकै कम छ । हाम्रो नेतृत्वपंक्ति (राजनीति र प्रशासनिक दुवै) मा अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास र आमनागरिकको समुन्नतिबारे कुनै चिन्तन नै छैन, भिजन त परै जाओस् ।
कामचलाउ ढंगले निर्णय लिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा विकास प्रक्रिया लथालिंग र अव्यवस्थित भएको छ । उदाहरणका लागि देशमा अहिलेसम्म विकेन्द्रीकरणको व्यवस्थापनका लागि झन्डै एक दर्जन आयोग, समिति र कार्यदल बने ।
राज्यकोषबाट राम्रै तलबभत्ता र सुविधा दिइएका ती आयोग, समिति र कार्यदलले निकै उपयोगी सुझावहरूसहित प्रतिवेदन पनि बुझाएकै हुन् । फेरि, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नाममा दुईवटा आयोग र कार्यदलहरूले काम गरिरहेका छन् ।
यी दुवै आयोग र कार्यदलले विगतका एउटा पनि रायसुझावसहितका प्रतिवेदन पल्टाएर नहेरेको कुरा हालै सार्वजनिक भएका नयाँ प्रतिवेदनका प्रारम्भिक खाकाले नै पुष्टि गर्छ ।
सीमित व्यक्ति, समूह वा दलविशेषको प्राथमिकता, चासो र सरोकारका भरमा नीतिगत निर्णय लिने प्रक्रियाले गर्दा हामी विश्व आर्थिक परिवर्तनका रमिते मात्र बनेका छौं ।
हाम्रो आफ्नै सोच, दृष्टिकोण र राष्ट्रिय प्राथमिकता छैन । दक्षिण र उत्तरको हावाले जताजता लैजान्छ, त्यतात्यता बहने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदासम्म समृद्ध मुलुकको सपना पूरा हुनेछैन ।
आर्थिक सुधारका प्रक्रियासँग जोडिएका झन्डै दुई दर्जन कानुन अहिले पनि संसद र विभिन्न समितिमा अड्किएर बसेका छन्, तर संसदले ‘बिजनेस’ पाएन भनेर व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगन भएको छ ।
विभिन्न संसदीय समितिका बैठक केवल सांसदको खाजा खाने भेलामा परिणत भएका छन् । विकास समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन केलाउँदा केवल निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ, निर्देशनको पालना नहुँदा त्यसको प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ ।
प्रशासकहरू हाकाहाकी सांसदको काम निर्देशन दिने त हो नि भन्न थालेका छन्; अर्थात् काम केही नगर्दा पनि चलेकै छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप अन्योलग्रस्त तुल्याएको छ ।